Iindaba -Umhlaza olwa nayo, la makhowa ayasebenza!
Kwiziganeko eziphezulu zomhlaza, kungxamisekile ukuthintela kunye nokulwa umhlaza! Uphando lwezonyango lubonakalisile ukuba ubuncinci i-35% yomhlaza inxulumene kakhulu nokutya, ke ukutya okuchanekileyo kubaluleke kakhuluUthintelo lomhlaza.
amakhowa anevumba elimnandi
Amakhowa bubuncwane ekutyeni. Abadala babeyibiza ngokuba "yiNdlovukazi yamakhowa" kunye "nenkosi yemifuno", ebonisa indawo yayo kumakhowa. Amakhowa anesondlo, amnandi kwaye ayahlaziya. Yimveliso elungileyo yokwandisa ubomi.
I-Lentinan: sisixhobo esinomsebenzi okhethekileyo womzimba kunye nesona sithako sisebenzayo kwi-Lentinus edode. Inokuthintela umsebenzi weeseli zomhlaza kunye nokuphucula ukusebenza komzimba womntu. Kuqwalaselwa njengesixhobo esisebenza ngokukhusela amajoni omzimba kwii-lymphocyte ze-T. Inokonyusa ukuphendula kwamajoni omzimba kukhuthazo lwe-antigenic, ibuyise umsebenzi wee-lymphocyte ze-T kwaye ulwe ngempumelelo nomhlaza.
I-RNA: inokuvelisa i-interferon echasene nomhlaza ukukhusela umhlaza.
I-Selenium: inokususa ngokufanelekileyo i-radicals simahla emzimbeni, yonyuse ukusebenza komzimba womntu, kwaye ithintele umhlaza wesisu, umhlaza wokuqina kunye nezinye izifo zenkqubo yokwetyisa.
I-Auricularia auricula imnyama kwaye imdaka ngombala, iyahlafuna, kwaye imnandi. Yimveliso ephezulu yezempilo ngenxa yesondlo sayo esityebileyo.
I-Auricularia auricula polysaccharide: I-Auricularia auricula polysaccharide yicocopolysaccharide ene-asidi ene-Auricularia auricula. Inempembelelo echasene nomhlaza, inokulawula ukungakhuseleki komntu, kunye nokuthintela umhlaza.
I-collagen yokutyala: inokukhuthaza i-peristalsis yamathumbu, ikhuthaze ukukhutshwa kokutya okunamafutha emathunjini, kunye nokuthintela umhlaza wamalungu kunye neminye imihlaza yomhlaza.
I-Auricularia auricula polysaccharide idlala indima echasene nomhlaza, kodwa iAuricularia auricula polysaccharide ichaphazeleka ngokulula liqondo lobushushu, ke ixesha lokupheka akufuneki ukuba lide kakhulu. Ukugcina izondlo ezichasene nomhlaza zeAuricularia auricula.
I-Ganoderma lucidum polysaccharide: inokunceda ukulawula ukusebenza komzimba kunye nokuphucula amandla omntu okulwa nomhlaza, ikakhulu ngezi ndlela zilandelayo: ① inokuphucula ukusebenza kweeseli zokubulala zendalo, ukutshabalalisa ukuhlanganiswa kwe-DNA yeeseli zomhlaza kunye nokuthintela ukwanda kweeseli zomhlaza. ② Inokuphucula inani kunye nomsebenzi wee-lymphocyte ze-B, ukuphucula i-phagocytosis ye-phagocytes, ukuphucula i-cytotoxicity ye-T yokubulala iiseli kunye nokubulala iiseli zomhlaza. ③ Inokuphinda ikhuthaze ukudityaniswa kwee-acid ze-nucleic kunye neeproteni, isuse ii-radicals zasimahla kunye nokukhusela iiseli.
I-Ganoderma lucidum triterpenoids: inhibition ngqo yeeseli zethumba kunye nefuthe elifanelekileyo le-analgesic. Uphando lwe-Pharmacological lubandakanya i-anti-tumor, anti-microbial, hypolipidemic, anti-inflammatory reaction, immune immune njalo njalo.